I-DNA igama lomlingo elixazulula yonke into yokubulala nokuxhaphazwa ngokwesondo! : UMartin Vrijland
Ukuveliswa kwevili, injini ye-steam, umbane kunye ne-intanethi beyimpumelelo, kodwa i-DNA mhlawumbi iyona nto ukuxhamla. Siyabulela kule DNA esaziyo i-100% ngokuqinisekileyo ukuba uJos Brech ungumbulali kunye nomxhaphazi wesondo ngo-Nicky Verstappen. Ngoko ke ithambo lokuvuyisa ngomnkantsha ukuba intsapho kaNicky igqityiwe ekugqibeleni. Unokucinga ukuba umama ufuna ukubheka umbulali onyantyala emehlweni!
Ngaba ubona iziphi iingxaki ezinjalo fumana iDNA Ukuba i-100% ubungqina bento ethile iqwalaselwa? Uhlala ufuna inkxaso. Ukuba khona kwindawo ethile akuthethi ukuba ungumbulali okanye umxhaphazi wesini. Ukubandakanyeka kwisenzo sokuziphatha ngokwesini akuthethi ukuba uye wahlawuliswa kwimeko yokuxhatshazwa ngokwesini.
Kufuneka nethemba lokuba uye wacacisa kwinqanaba le-anecdote elingentla elingenakuthetha nantoni na ngolwaphulo-mthetho. Kwimeko kaNicky Verstappen, umzekelo ngazange Ingxelo ye-NFI ye-autopsy ibonise ukuba wayebulewe. Kwakhona, akukho bungqina bokuba kukho ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo. Ngoko ke kuthelekiswa necala lakho elichazwe ngasentla kunye nommelwane.
Ngaba ufuna ukuphelela kwimeko ezayo? Ukuba umthetho omtsha uqinile - Ndiyabulela kule nkundla yemidiya kunye nokuvuselela ngo-Peter R. de Vries - kuza, ngoku kufuneka ugqoke i-hairnet kunye neiglavu zeerubha xa usaya kwikhofi nommelwane.
Ngaba kunokukho ezinye izizathu zokuba isiseko sedata yeDNA ifakwe kwi-PsyOp? Ingaba ngaba ngaba kukho ukuhambelana nomthetho onyanzelekile wokugonywa? Emva koko funda eli nqaku vu melana.
tags: 100%, ubungqina, ikhowudi, Dna, intsapho, eziziimbalasane, Jos Brech, komdlalo, xhatshazwa, umda, UNicky Verstappen, UPeter R. de Vries, ngesondo, sebenza, kwimeko
30 Agasti 2018 kwi-10: 42
1 Septemba 2018 kwi-08: 29
Oku kufuneka kube ngumsebenzi wokufunda kubantu abangenakuzicingela bona (i-99% yamaDatshi).
2 Septemba 2018 kwi-21: 50
gronz23: Cacisa lo mntu kumntu okhutheleyo, uninzi lwawo lujulile kulo. Bayijika ngokuzikhusela kwaye ekugqibeleni bakuxelele ukuba wena usetyenzisile into ethile okanye uphume ngokupheleleyo kwimephu. Ndidla ngokuva ukuba ndihlala ndicinga ukuba bonke ngabadlali kunye nokuba yonke into ifakwe kwisiteji. Bafuna ukuthetha kunye nabeendaba, nokuba ngaba ubanika uhlalutyo oluhle kunye neenkcukacha kwimibandela ebalulekileyo, kodwa bona ngokwabo bathetha njengemidonti yamaphephandaba kwaye bakuxelele ngokuqinisekileyo oko iindaba ezibaxelele ukuba wena ufanele ukholelwe ngokwemiqathango izimvu. Ngenxa yokuba, njengoko amajelo ashicilelwe, oko kuya kuba yinyaniso yinyani, akukho nanye inokwenzeka. Unomdla ngenxa yokuba i-hypnosis kunye ne-rasti rocelli kunye nelomon yiloo nto ithetha ngayo. Bakholelwa ngokwenene kwisiqhamo esinezityalo ezinomsoco, kodwa limon elimuncu, nangona ubaxelela ukuba yi-lemon, bathi uyaphambuka. Ngamanye amaxesha kuninzi kwaye kukho enye i-narcissism, enye inokuthi ayikwazi ukulunga ngaphandle kwam.
« Ukwenza umbulali kuNicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
Ukuziphatha ngokwesini kunye nokulandelelana ngurhulumente »
Iindwendwe ezipheleleyo: 29.858